Prezidaant Doonaald Traamp Haasaa Biyyoolessaa kan Waggaa Bor Dhiyeessu
Prezidaant Doonaald Traamp haasaa biyyoolessaa kan waggaa kan jalqabaa bor gongresa biyya isaaniif dhiyeessuuf jiran.
Seera tumtoonnii fi dhaggeeffattoonni guutuu addunyaa irra jiran dhimmootii biyya keessaaf imaammata alaa kan bara 2018f ka jrezidaantichi dursa kennaniif dhaga’uuf jiru.
Traamp waggaa tokko falmisiisaa ta’e hojii itti jalqabanii boosa dilaala warra dureessaaf gad xiqqeessuu irratti injifannoo argatan irratti deggersa uummataa argachuuf carraaqaa ennaa jiran kanatti garuu immoo falmii fi walii galtee dhabiinsi hedduu irraan kan ka’e seenaa keessatti prezidaantiin haaraan deggersa uummataa qabu isa gad aanaa argatan.
‘State of the Union speeches’ - Haasaha Pireezdaantota Ameerikaa
Haasaan biyyoolessaa kan waggaa prezidaantii dhaan Kongresiif dhiyaatu aadaa dimokraasii Ameerikaa ti.
Traamp kongresii biyyaaf waggaa darbe haasaa dhageessisanii turan, garuu hojii erga jalqabanii torbanneen hanga tokko qofaa waan ta’eef jecha haasaa biyyoolessaa kan waggaa hin turre.
Galgala kana kan ani as jiruuf ergaa tokkummaa fi ciminaa akkasumas ergaa onnee koo irraa ta’e jedhan.
Waggaa kana haasaa isaanii keessatti prezidaantichi cimina dinageee Ameerikaa irratti fuuleffatu jedhamee eegama.
Nan jedha, biyyi keenya dhugumatti haala gaarii irra jirti. Dinagdeen keenya isa kana duraa caala gaarii ta’ee jira. Lakkoobsa dalagaa jiruu yoo ilaalte. Gabaa addunyaa yoo ilaaltes sadarkaa ol aanaa irra jirra jedhaniiru.
Hamma ammaatti dinagdeen guddataa adeemuun garuu Traamp deggersa isaan uummata biraa qaban hin fooyyessine.
Demokraatonni waan dursa kennaniif ifatti hin ibsine jechuun komatu. Hoogganaan garee demokraatotaa senator Chuck Schumer akka jedhanitti hoogganoonni keenya garee Republikaanotaa ofii isaanii danda’anii gara fuula duraatti sosso’uu hin barbaadan. Prezidaant Traampiin sodaatu. Waan isaan gochuuf jiran beekuu fedhu. Garuu kana godhaa jedhanii waan itti himan tokko iyyuu hin qaban. Kan isaan yeroo mara ittiin jedhan. ofuma keessanii hojjedhaa ka jedhu. naaffannee jirra jedhan.
Dinagdeetti dabalee daldala, fi dhimmootii immigration irratti Traamp dhimma imaammata alaa kooriyaa kaabaa, Iraanii fi Afgaanistaaniin ilaalchisee ibsa kennu jedhamee eegama.
Cabaa Misaa’eela Iraantu Yaman Keessaa Argame Jetti Amerikaan
Koriyaan Lamaan Waan Irratti Walii Galan Gamnii Kaabaa Digaa Jirti
Afgaanistaan Keessatti Lootee Seentonni Balaa Geesisan
Somaaliyaa Keessatti Ajajaa Waraanaatu Ajjefame
Bidiruu baqataa fi nama jireenna wayya qabu barbaada yaa'u baatee deemu torbaan kana Yemenitti gara gale nama 30 olitt keessatti dhumate